ကောင်းကင်ကို: သတင်းကျင့်ဝတ်တွေ သတင်းပညာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?
သတင်းကျင့်ဝတ်တွေ သတင်းပညာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?
ဒီလို သတင်းဌာနကြီးတွေရဲ့ သတင်းတွေကြောင့်လည်း လူတွေ ဒီလောက်သွေးဆူနေတာ။
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တကျော့ ပြန်လည် ဖြစ်ပွါးလာသော ပဋိပက္ခ များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်း များ (INGO) နှင့် OIC (Organization of The Islamic Cooperation) တို့ နောက်ကွယ် မှ ကြိုးကိုင် လုပ်ဆောင် မှု များ ရှိနေကြောင်း ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော် က ပြောကြား
ဇွန်လ အတွင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ များ ငြိမ်သက် ခဲ့ရာမှ ယခု တဖန် ပြန်လည်၍မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ ပေါက်တော မြို့နယ် များတွင် ယခင် ဖြစ်ပွါးခဲ့စဉ် ကထက် ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွား နေကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဖြစ်ပွား ရာတွင် ဘင်္ဂါလီ များက မိမိတို့ နေအိမ်ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် စတင် မီးရှို့ခြင်း အပြင် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ နေအိမ် များကိုပါ စတင် မီးရှို့ ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိ ရပြီး ယင်းဖြစ်စဉ် များကို ကြည့်လျှင် ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပွား လာရခြင်း မှာ ပြည်ပ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်း များ၏ ပယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့ချုပ် ၏ အောက်တိုဘာ လ ၂၅ရက် နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် ကဆိုသည်။
"မင်းပြားမှာ ဒီနေ့ က OIC ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရင် နောက်နေ့ မှာ ပဋိပက္ခ စဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ပြည်ပ အဖွဲ့ အ စည်း တွေရဲ့ ပယောဂ မကင်းဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင် နေတယ်" ဟု ဦးမျိုးကျော် က ရှင်းပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ တွင် နောက်ကွယ် မှ ကြိုးကိုင် လှုပ်ရှား နေသော လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့အစည်း များ ရှိနေပြီး ၎င်းတို့ကို ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့် အညီ ထိရောက်စွာ အရေး ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက အောက်တိုဘာ လ ၂၅ရက် နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့သည်။
ယခုအခါ ယင်းသို့ တစ်ကျော့ပြန် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု များကြောင့် လူပေါင်း ၆၀ ကျော် သေဆုံး ခဲ့ပြီး၊ ၉၀ကျော် ဒဏ်ရာကာ နေအိမ် ၃၀၀၀ နီးပါး မီးလောင် ပျက်စီး ခဲ့ကြောင်းကို ယနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ များ တွင် ဖော်ပြသည်။
သတင်းခေါင်းစဉ်ပေးထားပုံက ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် တမင်လုပ်တာလား၊ သတင်းပညာ မပြည့်ဝတာလားတော့ မသိဘူး။ ဒါမျိုးခေါင်းစဉ်က သတင်းကျင့်ဝတ်နဲ့လည်း မညီပါဘူး။ အဲဒီ့ သတင်းကို ခေါင်းစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင် တကယ်ဖြစ်သင့်တာက “ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ INGO နှင့် OIC တို့ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ဟု ဆို” အစား “နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ဟု ALD ဆို” လို့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အခုဟာက အမှတ်တမဲ့ဆိုရင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နိုင်တယ်။ ယက်တော ကိစ္စတုန်းက သတင်းတခုလိုမျိုး အခုဟာက ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက ဝန်ကြီးတယောက်လား အစိုးရ အရာရှိတယောက်လား မသိဘူး။ ဒေါ်စုနဲ့ ယက်တောကို ဘလိုင်းကြီး သမုတ်တယ်။ အဲဒီ့မှာ သတင်းတခု ခေါင်းစဉ်တပ်ပုံက “ယက်တောသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရည်းစား” ဆိုတဲ့သဘောမျိုး (အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ။ နောက် အဲဒီ့သတင်းခေါင်းစဉ်ကို ပြင်လိုက်ကြတယ်။) တကယ် ဖြစ်သင့်တဲ့ခေါင်းစဉ်က... ဥပမာ ပြောသူက ဝန်ကြီးဆို၇င် “ယက်တောသည် ဒေါ်စုရည်းစားဟု (……) ဝန်ကြီးပြော) …အဲလိုမျိုး တပ်ရမှာပေါ့။
The Voice ဂျာနယ်က အရင်ကတည်းက ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ INGO တွေကို အယ်လ်ခိုင်းဒါးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလို့ အစိုးရက ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတုန်းကလည်း အင်တာနက်မှာ အထောက်အထားပြည့်စုံစွာနဲ့ ဖမ်းမိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သတင်းကို တင်တယ်။ တကယ်က အဲဒီ့အထောက်အထားမိတယ် ဆိုတာက ဘယ်သူပြောတာလဲ။ အစိုးရ အရာရှိ တယောက်ယောက် ပြောတာလား။ ပါးစပ်သတင်းကိုပဲ ထည့်ရေးလိုက်တာလား…အဲဒါကို သေချာဖော်ပြရမယ်။ နောက် အဲဒီ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးရဲ့ နာမည်တွေ ဓါတ်ပုံတွေလည်း သတင်းblog တွေမှာ အကြမ်းဖက်နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး ပြန့်ရော။ နောက်ပြီးတော့လည်း ဘာမှဟုတ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အယ်လ်ခိုင်းဒါးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ကရော အငြိမ်နေပါ့မလား။ တကယ် မဟုတ်ရင် အသရေ အဖျက်ခံရသူ အတွက်လည်း အရမ်းနစ်နာပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကိုလည်း အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် သွေးထိုးပေးရာ ကျပါတယ်။ နောက်ပြီေးတာ့ အဲဒီ့သတင်းကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ ပြန်ပြီး တောင်းပန်ခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သတင်းကျင့်ဝတ်ကို အလွန်အမင်း ချိုးဖောက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ပဲ အဲဒီ့ဝန်ထမ်းတွေ အယ်လ်ခိုင်းဒါးနဲ့ Link တွေ ရှိနေတယ်ပဲ ထားပါတော့။ document တွေ သေချာရဲ့လားဆိုတာ အသေးစိတ်လိုက်ပြီးမှ၊ သတင်းကို အပြည့်အစုံရအောင် လိုက်ပြီးမှ သေချာရေးသင့်တယ်။ ခုက နိုင်ငံကိုဆောက်တည်မဲ့ စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ကြီးတွေလို့ ပြောပြီး အရပ်သတင်းတွေထက်တောင် အဆင့်နိမ့်နေတယ်။
အခုသတင်းရဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ် ကိစ္စ အပြင် content ကိစ္စကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။ ALD က အဲလို ပြောတယ်ဆိုရင် အဲလိုပြောတဲ့ အကြောင်း သတင်းရေးခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုက source တခုတည်းကိုပဲ တဘက်သတ်မေးပြီး ရေးထားတယ်။ တခြားတဘက်ကို မမေးထားသလို၊ ဒေသတွင်းက တခြားလူတွေ၊ ဒေသတွင်းက ရှိတဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နောက် အဲဒီ့ အစွပ်စွဲခံရတဲ့ INGO တွေ၊ နောက် OIC ကိုလည်း ဆက်သွယ်ပြီး မေးသင့်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်ကို တဘက်သတ် တပ်ထားတယ်။ observation လည်း ဘာမှ လုပ်မထားဘူး။ ဦးမျိုးကျော် ပြောတာချည်း ချရေးထားတယ်။ (How, what, why, when, where, who) ဆိုတဲ့ question တွေကို အဲဒီ့သတင်းဌာန မသိလေရော့သလား? နောက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း ပြောရတာ အက်ကြောင်းထပ်နေပြီ။ ဦးမျိုးကျော် ဆိုတဲ့သူပြောလို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ရေးတာပါဆိုရင် သူပြောသလောက်ပဲ ရေးတော့မှာလား။ နောက်ဆုံးပိတ် တခြား observation မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဦးမျိုးကျော်ကိုတော့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်သင့်တာပေါ့။ ဥပမာ... ရေးထားတာက “မိမိတို့ နေအိမ်ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် စတင် မီးရှို့ခြင်း အပြင် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ နေအိမ် များကိုပါ စတင် မီးရှို့ ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိ ရပြီး ယင်းဖြစ်စဉ် များကို ကြည့်လျှင် ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပွား လာရခြင်း မှာ ပြည်ပ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်း များ၏ ပယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း” လို့ ရေးထားတော့ သူက ပြောလာရင် ပြန်မေးလို့ ရတာတွေက … ရခိုင်တွေအိမ်ကိုပါ မီးလောင်အောင်လို့ သူတို့က ရှို့တာလား (ဒါဆိုရင်တော့ လူမျိုးနှစ်မျိုးလုံး ရောနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်မျိုးမှာမှ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်။ ရခိုင်သက်သက် မွတ်စလင်တွေသက်သက် နေတဲ့ ရပ်ကွက်မျိုးဆိုရင် ရှို့ရင် ရှို့တဲ့သူရဲ့ရပ်ကွက်ပဲ မီးလောင်မှာပေါ့။ သူတို့အိမ် သူတို့ ရှို့တယ်ဆိုတာကို ဦးမျှိုးကျော်က သူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်၇တာလား။ ဘယ်သူက ပြောတာလဲ။ တယောက်ယောက်က တကယ် မျက်မြင် တွေ့လိုက်တာလား။ တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ပါးစပ်သတင်းလား။…အိမ်မီးလောင်သွားတဲ့ မွတ်စလင်တွေကရော ဘာပြန်ပြောလဲ? အဲဒါမျိုးတွေကို သေချာမေးဖို့နဲ့ observation လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်) တခြား observation လုပ်လို့ ရတာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အခုလို ရေးထားတာကတော့ ALD ရဲ့ ဝါဒကို propaganda သဘောမျိုး ဝါဒဖြန့်ပေးရုံ အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ။ သတင်းကိုသာ သေသေချာချာ ရေးတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် ဆက်လိုက်စရာတွေ အများကြီး ရလာမှာ ဖြစ်သလို ဦးမျိုးကျော် ပြောတာ ဟုတ်ခဲ့ရင် INGO နဲ့ OIC ကို တရားစွဲလို့ ရမှာ ဖြစ်သလို (တကယ် သူတို့ဖန်တိးတာသာဆိုရင် တရားစွဲရမှာပေါ့) တကယ်လို့ အဲဒါမှားရင်တော့ မသင့်လျော်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တဘက်သတ် ဖော်ပြတဲ့ သတင်းဌာနနဲ့ပြောသူတွေ တရားစွဲခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးသတင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန် ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း တကယ်ဟုတ်နေရင် INGO တို့ OIC တို့က တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့အဖွဲ့တွေထဲက အပြစ်ရှိသူတွေကို အပြစ်ပေး အရေးယူလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ပွဲဆူအောင် လုပ်တဲ့အတွက် အဲဒီ့သတင်းဌာနနဲ့ ပြောသူမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
သတင်းဖတ်သူတွေလည်း သိသင့်ပါပြီ။ တကမ္ဘာလုံးက သတင်းဌာနတွေ အကုန်မှားပြီး ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေလောက်ပဲ မှန်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျရဲ့လား ။ တကမ္ဘာလုံး မှားနေတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ(မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကပါ) ဘာအညှိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေ၇တာလဲ။ ကြားနေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ၊ ကုလသမ္မဂ္ဂက ကိုယ်စားလှယ်တွေ သာမက အယ်လ်ခိုင်းဒါကို ချေမှုန်းလေ့၇ှိတဲ့ အမေရိကန်ကပါ ဒီကိစ္စကျမှ ဟိုဘက်ကို တခြားဘက်ကို ဘက်လိုက်နေကြတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား? OIC ကို ဆန့်ကျင်တာက ထားပါတော့။ ကင်တားနားက အစ ဆန့်ကျင်ရလောက်အောင် အမှန်တကယ် ဘက်လိုက်နေကြပြီလား။ OIC ကို လက်မခံတာက ထားတော့။ ဘာလို့ ကုလသမ္မဂ္ဂ ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကို အဝင် မခံရဲရတာလဲ။ ဟိုလူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားသာ ဆိုရင် ဘာလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ျက သူတို့ကို ပြန်မောင်းထုတ်ရတာလဲ။ သူတို့မှာ ဟိုဘက်နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားသာ ရှိရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္ အစိုးရက ပြန်လက်မခံရင် ကမ္ဘာကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဝိုင်းပြောမယ့် အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအတိုက်အခံတွေကပါ သူတို့ အစိုးရကို အပြစ်တင်မယ်ထင်တယ်။ အခု ဘာကြောင့် အပြစ်မတင်ကြတာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ ဝိုင်းအညှိုးထားနေတာလား။ လဝက က လာဘ်စားတာကသာ အဓိက အကြောင်းရင်းဆိုရင် လဝက ကို ထိုးရတဲ့ လာဘ်ဆိုတာက မြန်မာအစစ်ဆိုရင်တောင် မနည်းထိုးရတာ။ ဒီတော့ အဲလောက်မှ ပိုက်ဆံရှိနေရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားအဖြစ် ဟိုမှာ မနေဘဲ ဘာလို့ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံမဲ့အဖြစ် ဒုက္ခလာခံနေကြတာလဲ? ဗိုက်ပူနံကားလေးတွေ သူတို့ထဲမှာ အများကြီးတွေ့တယ်။ အဲဒီ့လူတွေမှာ လာဘ်ထိုးနိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံ ရှိပါ့မလား။ တခုတော့ ၇ှိတယ်။ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူ စီးပွါးရေးသမား အနည်းငယ်တော့ ၇ှိလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သာ့ ဒီမှာမွေးလာပြီး ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက်က နိုင်ငံသားရပြီးမှ ခုမှ ပြန်နှင်ထုတ်ခံရတာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဥပမာ ပေးရရင် ...ကိုယ့်မျိုးဆက်မှာ စင်ကာပူဖြစ်ဖြစ် အနောက်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် သွားအခြေချပြီးခါမှ နောက်မျိုးဆက် ကိုယ့် မြေးမြစ်တွေကျမှ အဲဒီ့နိုင်ငံအစိုးရတွေက ကိုယ့် next generation တွေကို နိုင်ငံသား အဖြစ်ကနေ ပြန်ရုပ်သိမ်းရင် သူတို့ ဘယ်နိုင်ငံမှာ သွားနေရမလဲ? ဘယ်နိုင်ငံက လက်ခံမှာလဲ?ကိုယ် အဲ့လိုလူ ဖြစ်ရင်ရော ကိုယ့် မြေးမြစ်တွေ အတွက် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ? အဲလိုလူတွေကို ကျူးကျော်သူလို့ ခေါ်ရင် သူတို့ဟာ မွေးရာပါ ကျူးကျော်သူတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မွေးလာခြင်းကိုက ကျူးကျော်မှု၊ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တဘက်မှာ သူတို့ထဲကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားလူမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်လာရင်တော့ အရေးယူအပြစ်ပေးရမှာ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ (အကြမ်းဖက်သူကိုပဲ) နှိမ်နင်းရမှာက တပိုင်းပါ။
ရေးချင်တိုင်းသာ ကျင့်ဝတ်မဲ့ ရေးနေကြမယ် ဆိုရင် ရေးနေတဲ့ သတင်းဌာနတွေဟာ.... ပဋိပက္ခရဲ့ နှစ်ဘက်လုံးက ကိုယ်တိုင် မီးရှို့သူတွေထက်တောင် အပြစ်ကြီးနိုင်တယ်၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုကြီးနိုင်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ တဘက်သတ် ရေးသားချက်တွေဟာ သွေးပိုဆူစေမှာပါ။ Facebook မှာကတော့ လူပေါင်းစုံ ရှိတဲ့အတွက် ထိန်းဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ အဓိက သတင်းဌာနကြီးတွေလို့ ခံယူထားသူတွေ အနေနဲ့တော့ ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုပါတယ်။
သတင်းကျင့်ဝတ် အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ တခြားအတွေးတွေကိုပါ ဖြည့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးကပုံက http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484456818241249&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&theaterက ဟာကို အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ထိုင်းစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၁ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ screen shot ဖမ်းထားတာပါ။
သူငယ်ချင်းတယောက်ကလည်း ဇွန်လ က The Voice ရဲ့ သတင်းတခုကို screen shot ဖမ်းထားတာ ရှိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အဲဒီ့ သတင်း လွဲနေတာ ထင်ရှားနေပြီ မဟုတ်ပါလား။
ထိုင်းစံတော်ချိ်န် ညနေ ၄နာရီ ၃၄ မိနစ်မှာ တချက်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ့ သတင်း မတွေ့တော့ပါ။ The Voice က သူတို့ရဲ့ သတင်းကို (ခုချိန်ထိ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်း လုံးဝ မရှိဘဲ) ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ။http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484456818241249&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&theaterမှာ အဲဒီ့သတင်း မရှိတော့ပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 9:47 PM
Labels: articles, Journalism, ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး
ကောင်းကင်ကိုရဲ့ ဒီလို ရေးသားဝေဖန်ချက်ကို လုံးဝ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒီဝေဖန်ချက်ကို Reshare ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။
စင်္ကာပူနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက သားသမီးလက်ထက်မှ ပြန်မောင်းထုတ်ရင် ယိုးဒယားလောက် ပြန်နေပြီး အဲဒီနိုင်ငံတွေကို ထုံးစံအတိုင်း ထိုင်ဆဲမှာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ယိုးဒယားတို့ မလေးရှားတို့ကိုတော့ မဆဲရဲဘူးလေ၊ သူတို့က ဒေသသားအချင်းချင်းဆို တစ်ကယ်ဗျင်းတာ၊ ဗမာတွေလိုပဲ ဟီး ဟီး
အဲလိုလူ့အခွင့်အရေးသမားလိုလိုဘာလိုလို ကြောင်တောင်တောင် အတွေးအခေါ်တွေကြောင့် ဗမာပြည်မူစလင် နိုင်ငံ မကျာမှီဖြစ် မယ်
အဲလိုလူ့အခွင့်အရေးသမားလိုလိုဘာလိုလို ကြောင်တောင်တောင် အတွေးအခေါ်တွေကြောင့် ဗမာပြည်မူစလင် နိုင်ငံ မကျာမှီဖြစ် မယ်))) အေးဗျာ။ အဲ့ကျတော့လည်း ယုံကြည်ချက် မခိုင်မာတဲ့သူ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင် မပိုင်နိုင်တဲ့သူ၊ အများလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့သူတွေ ဗလီဦးထုပ်လေးဆောင်း မုတ်ဆိတ်မွေး အရှည်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ကတော့ အရက်ကလေးသောက်လိုက်၊ ကလပ်ကလေးသွားလိုက် (ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါပေါ့) စာလေးရေးလိုက်၊ အစွန်းရောက်တွေကို ငပြိန်းတွေကို ဆဲလိုက်နေမှာပေ့ါ :D
kaung kin ko, i pray for you that your sister or daughter won't be muslim's wife.
download လုပ်လိုပါက ပုံကို click ပါ။